ကြမ်းတမ်းသော Cat S61 ကိုဖြန့်ချိခဲ့သည်။ ၎င်း၏ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များကိုသိ! | Androidsis
ကြမ်းတမ်းသော Cat S61 ကိုဖြန့်ချိခဲ့သည်။ ၎င်း၏ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များကိုသိ!
အာရုန်သည် Rivas | | မိုဘိုင်း
ထို့အပြင် Caterpillar အဖြစ်လူသိများကြောင်, ကုမ္ပဏီ၏တယ်လီဖုန်းများထက်ပိုပြီး၎င်း၏လယ်ထွန်စက်, စက်နှင့်ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းကိရိယာများအားဖြင့်ပိုပြီးသွင်ပြင်လက္ခဏာသောကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ သို့သော်ဤအပိုင်းသည်လုံး ၀ မကောင်းသော်လည်း၎င်းသည် Samsung၊ Huawei သို့မဟုတ် Xiaomi ကဲ့သို့သောအခြားကုမ္ပဏီများကဲ့သို့လူကြိုက်များခြင်းမရှိသော်လည်းအမှန်မှာ၊ ဤမြင့်မားသောပြည့်နှက်နေသောစျေးကွက်တွင်ပြည်သူလူထုကကောင်းစွာလက်ခံထားသောဆိပ်ကမ်းများနှင့်ရံဖန်ရံခါပေါ်ပေါက်လာသည်.
ဤအခါသမယတွင်ဤထုတ်လုပ်သူကကျွန်ုပ်တို့အားအဆင့်မြင့်ခံထိုက်သောသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အင်္ဂါရပ်များပါ ၀ င်သောလက်ကိုင်ဖုန်းဖြင့်ပြသသည်။ ငါတို့ပြောနေတာကတော့ Cat S61, လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်မတိုင်ခင်ကထုတ်ခဲ့တဲ့ S60 ကိုဆက်ခံသူ. ငါတို့ကိုမင်းကိုပြတယ်။
ဒီမိုဘိုင်းကိုလွန်ခဲ့တဲ့နာရီအနည်းငယ်ကမှစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့ပြီး၎င်းတွင် ၅.၂ လက်မအရွယ် IPS LCD မျက်နှာပြင်ပါရှိသည် FullHD resolution 1.920 x 1.080 pixels နှင့်အတူ Corning Gorilla Glass5ကာကွယ်မှုဖြင့်စိုစွတ်သောလက်အိတ်များနှင့်လက်ချောင်းများနှင့်အလုပ်မလုပ်သောပြproblemsနာများမရှိသောကြောင့်၎င်းသည်ခက်ခဲသောအခြေအနေများအတွက်အကောင်းဆုံးနေရာဖြစ်လာသည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်၎င်း၏နည်းပညာဆိုင်ရာအကျိုးကျေးဇူးများအရ ဒီမိုဘိုင်းမှာ ၂.၂GHz အမြန်နှုန်းရှိတဲ့ octa-core Qualcomm Snapdragon 630 SoC တပ်ဆင်ထားပါတယ်4GB RAM၊ 64GB သိုလှောင်မှုပမာဏသိုလှောင်နိုင်သည့် microSD ကဒ်ပြားနှင့် ၄၅၀၀mAh ဘတ္ထရီကြီးမားသော Quick Charge 4.500 မြန်သောအားသွင်းသည်။ ထို့အပြင်၎င်းကိုသတိပြုသင့်သည် Cat S61 တွင် Android 8.0 Oreo ပါရှိပြီးနောင်အနာဂတ် Android P သို့အဆင့်မြှင့်တင်နိုင်သည်.
မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်း ဒီပစ္စည်းကိရိယာများ IP68 လက်မှတ်နှင့်အတူကြွလာ ၎င်းသည်အနိမ့်ဆုံးပြproblemနာမရှိဘဲတစ်နာရီသုံးမီတာအထိနက်ရှိုင်းသောလှုပ်ခြင်း၊ ရေကျခြင်း၊ ဖုန်မှုန့်နှင့်ရေတို့ကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ အရမ်း အမေရိကန်စစ်တပ်မှထုတ်ပြန်သော MIL-STD 810G စစ်ရေးလက်မှတ်ရှိသည်.
ကင်မရာများနှင့် ပတ်သက်၍ S61 သည် 16K megapixels ရှိသည့်နောက်ကင်မရာကို 4K resolution ဖြင့်ရိုက်ကူးနိုင်ပြီး LED Flash နှင့်အတူပေါင်းစပ်ထားသည်နှင့်ရှေ့ 8MP ။ ၎င်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့မှလေထုညစ်ညမ်းမှုကိုတိုင်းတာနိုင်မည့် -20 °မှ 400 °အတွင်းအပူချိန်အကွာအဝေးတွင်လည်ပတ်နိုင်သည့် FLIR Lepton အာရုံခံကိရိယာနှင့်metersရိယာနှင့် ၁၀ မီတာအထိအကွာအဝေးကိုတွက်ချက်ရန်လေဆာမီတာပါရှိသည်။
၎င်းတွင်ပါဝင်သောအခြားအင်္ဂါရပ်များအနက်ပါဝင်သည် dual-SIM ပံ့ပိုးမှု၊ WiFi ac, Bluetooth 5.0, NFC နည်းပညာအရွယ်အစားမှာ ၁၄၈.၁ မီလီမီတာ၊ အကျယ် ၇၂.၉ မီလီမီတာ၊ အထူ ၈.၄ မီလီမီတာနှင့်အလေးချိန် ၁၅၅ ဂရမ်ရှိသည်။ ဒါကြောင့်ငါတို့လက်မှာအတော်လေးအဆင်ပြေစေလိမ့်မည်.
ကြောင် S61 စျေးနှင့်ရရှိနိုင်မှု
ဒီ terminal ကိုယခုနှစ်ဒုတိယသုံးလပတ်မှာရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပြီးဈေးနှုန်းကတော့ယူရို ၈၉၉ ကျသင့်မှာပါ၎င်းသည်အနည်းငယ်မြင့်မားသည်ဟုထင်ရသော်လည်း၎င်းကိုသာမန်ပြည်သူလူထုအပေါ်အာရုံမစိုက်ဘဲ၊ စီးပွားရေးနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းတစ်ခုအပေါ်တွင်သာ မူတည်၍ ၎င်းသည်၎င်း၏ကြမ်းတမ်းပြီးပုံမှန်မဟုတ်သောသွင်ပြင်လက္ခဏာများနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာအသေးစိတ်အချက်အလက်များကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သိပ်မထင်ပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » ကြမ်းတမ်းသော Cat S61 ကိုဖြန့်ချိခဲ့သည်။ ၎င်း၏ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များကိုသိ!
TENAA မှဂုဏ်ပြုသော Honor 7C ကိုစစ်ထုတ်သည်
Essential Phone သည်ယခုနှစ်လယ်တွင်ဥရောပသို့ရောက်ရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်